Fanontaniana mampifoha ny eritreritra
"lza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehôvah? Ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka." - Sal. 24:3,4.
Ny fanahy izay miray amin'i Kristy (...) dia hiady amin'ny tsy fankatoavana rehetra sy ny fanatonana ny ota. Mihamazava sy mamiratra isan'andro izy ary mihamandresy hatrany. Mandeha amin-kery hatrany izy fa tsy mihareraka.
Aoka tsy hisy hamitaka ny fanahiny amin'izany zavatra izany. Tsy hitoetra ao am-ponao i Kristy raha mbola mitahiry avonavona ianao, na fanandratan-tena, na fitiavana ny fahamboniana, na voninahitra tsy misy vidiny, na faniriana tsy masina, fimonomononana, tsy fahafaliana, fangidiana, fitenenan-dratsy, lainga, fitaka ary fanendrikendrehana (...) Tokony hanana toe-tsaina kristianina izay hijoro ianao. (...)
Tokony hisy fiovam-po marina eo amin'ireo izay milaza fa mino ny fahamarinana, raha tsy izany dia ho lavo izy ireo amin'ny andron'ny fitsarana. Tokony hanatratra fetra ambony ny vahoakan'Andriamanitra. Tokony ho firenena masina izy ireo, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, taranaka voafidy — mazoto amin'ny asa tsara. Maty ho anao i Kristy, tsy ny mba hanananao ny firehetam-pon'ny olona eto amin'izao tontolo izao na ny zavatra tiany na ny fahazarany (...)
Tsy misy olona miditra ny vavahadin'ny voninahitra afa-tsy ireo izay mametraka ny fony any. Dia avelao hipetraka ny fanontaniana hoe: ny zavatry ny tany ve no antom-pisainanao? Madio ve ny eritreritrao? Miaina ny rivotry ny lanitra ve ianao? Misy fahalotoam-pitondrantena ve eny aminao? (...) Tso-po sy feno fanoloran-tena ve ianao, manompo an'Andriamanitra amin'ny fahadiovana sy ny hakanton'ny fahamasinana? Manontania amim-pahatsorana hoe: Zanak'Andriamanitra ve aho sa tsia? (...)
llaintsika ny fanavaozana lalina ho an'ny fiangonantsika rehetra. Tokony hiditra ao amin'ny fiangonana ny herin'ny fiovam-po avy amin'Andriamanitra (...) Aza ahemotra ny andro fiomanana. Aoka tsy ho rendrehana ao anatin'ny tsy fiomanana ka tsy hanana solika ao amin'ny fitoerany amin'ny fanala.(...) Aoka heverina amim-pahamatorana ireo voalaza ireo. Manontania tena amim-pahatsorana hoe: Isan'ireo voavonjy ve aho sa isan'izay ho very? Hahajoro ve aho sa tsia? Izay madio tanana sy mahitsy fo ihany no hahajoro amin'izany andro izany. - TMGW, 441-443.